Sagaing Region Supreme Court - သတင်းများ
ယင်းမာပင်ခရိုင်နှင့် ခရိုင်အတွင်းရှိ မြို့နယ်တရားရုံးများတွင် စစ်ဆေးလျက်ရှိသောအမှုများ၊ သီးသန့်တရားရုံးအမှုများ၊ အချုပ်တရားခံပါအမှုများအား အမြန်ဆုံးပြီးပြတ်စေရေးအတွက် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးသည့်အစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်း
မုံရွာ မေလ ၂၅ ရက်
(၂၅.၅.၂၀၂၂) ရက်နေ့၊ မွန်းလွဲ (၁၄း၀၀) နာရီအချိန်တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတရား လွှတ်တော်၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တရားသူကြီးချုပ်၊ တိုင်းဒေသကြီးတရားရေးဦးစီးမှူးနှင့် ယင်းမာပင်ခရိုင်နှင့် ခရိုင်အတွင်းရှိ မြို့နယ်များမှ တရားရေးအရာရှိများသည် စစ်ဆေးလျက်ရှိသောအမှုများ၊ သီးသန့်တရားရုံးအမှုများ၊ အချုပ်တရားခံပါ အမှုများအား အမြန်ဆုံးပြီးပြတ်စေရေးနှင့် လမ်းလုံခြုံရေးကောင်းမွန်ပါက မိမိတာဝန်ကျရာဒေသသို့ ပြန်လည်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရေးအတွက် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးသည့် အစည်းအဝေး ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါအစည်းအဝေးတွင် စစ်ကိုင်းတိုင်း‌ဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်မှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးများ၊ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးများနှင့် ယင်းမာပင်ခရိုင်နှင့် ခရိုင်အတွင်းရှိ မြို့နယ်တရားရုံးများမှ တရားရေးအရာရှိများ တက်ရောက်ကြပါသည်။
အစည်းအဝေးကို မွန်းလွဲ (၁၅း၃၀) အချိန်တွင် ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။
ကန့်ဘလူခရိုင်နှင့် မြို့နယ်တရားရုံး အဆောက်အဦ တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် တတိယအကြိမ် စာချုပ် ချုပ်ဆိုခြင်း အခမ်းအနား ကျင်းပခြင်း
မြန်မာနှစ်သစ်ကူးအန္တရယ်ကင်း ပရိတ်တရားနာယူပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပခြင်း
ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်များ၏ ၂၂ ကြိမ်မြောက်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး မှာကြားချက်များအပေါ် ထပ်ဆင့်ရှင်းလင်းခြင်းအခမ်းအနားကျင်းပ
Copyright © 2022 High Court of Sagaing State. All Rights Reserved.
Email : sagaing.hc@mptmail.net.mm
Last Updated : 22 June 2022